Home Wararka Maxaa ka soo baxay kulankii xalay ee Beesha Mareexaan iyo Farmaajo?
Maxaa ka soo baxay kulankii xalay ee Beesha Mareexaan iyo Farmaajo?
Madaxeeyne Farmaajo ayaa xalay waxa uu kulan dheer oo albaabada u xirnaa la qaatay qaar ka mida beesha Mareexaan oo isugu jira siyaasiyiin hore, ganacsato, oday dhaqameed iyo arday kuwaas oo isaga kala yimid guud ahaan dalka dibadiisa iyo gudahiisa. Kulankaan oo ay soo qaban qaabiyeen ganacsato gacan saar la leh madaxweyne Farmaajo ayaa looga hadlay arimo badan oo ay ku jireen dacwooyin beesha u qabto Farmaajo, arimaha Jubbaland iyo xaalada ka sii daraysa ee ka taagan dalka Soomaaliya.
Farmaajo oo markii hore doonayay in kulankaan lagu qabto goob qarsoodi ah oo ahayd in warbaahinta laga qariyo ayaa loo sheegay in ayan suugaral ahaynin in meel kale lagu qabto arimo la xiriira aminiga.
Inkastaa oo ayan MOL u suugaralin in ay hesho warbixin buuxda, hadana warar hor dhac oo ay nala wadaageen qaar ka mid ah ka qayb-galayaasha shirkaas ayaa noo sheegay in Farmaajo ku adkeeystay go’aankiisa la xiriria Jubbaland. Farmaajo ayaa sheegay in Axmad Madoobe uusan sii joogi doonin Kismaanyo isla markaana ay lama huraan tahay in beesha Mareexaan ayan marnaba tanaasulin.
Waxa uu ka codsaday beesha in qolooyinka Gedo gaar ahaan beesha reer Xasan runta loo sheego. Waxa uu yiri “.. Cabdirashiin Janan waa qaa’unul wadan , nasiib buu leeyahay waxa ay ahayd in tiirka la geeyo oo la dilo, lacag buu iga dhacay oo ahayd in uu kula dagaalo Axmad Madoobe, lacagteydii buu Axmad Madoobe siiyay oo beesha Mariixaan iyo anigaba la igula dagaalay”.
Farmaajo ayaa sidoo kale ka jawaabay arimo la xiriira colaada siyaasadeed ee u dhaxeeysa isaga iyo Madaxda ka soo jeeda degaanka Muqdishu, arintaasna waxa uu ku sheegay in ay tahay arin dowladeed, uma baahna in xal laga raadiyo meel aan xal ku jirin.
“…kooxdaas iswaalwaalayso waxa ay doonayaan waa la yaqaanaa, arintoodana waa lagu jiraa oo idinka ayaaba warbaahinta ka maqli doontaan… walaahi qaar ka mida waa lacag raadis iyo shaqo raadis, wax yar oo aan siin jirnay hadii aan dib ugu bilaawno berito waa ay aamusayaan.. laakiin waad I taqanaan ilaa iyo markii la i doortay qof aan ka yeelay baad iyo caga juglayn ma jirto, dowladnimada way soconayaa mana loo istaagatyo qoloyinkaas oo wax ay qaadi mataan ayan jirin”. Ayuu ku daray Farmaajo
Sida loo xaqiijiyay Farmaajo ayaa rumaysan in siyaasiyiinta uu ku sheegay “siyaasiyiinta fashilantay oo careeysan” in uu uga adkaaday siyaasada dalka gaar ahaan tan Muqdisho. Waxaana hadalkiisa laga dhadhansan karay in uu doonayo in uu qorshaynayo in qaar kamida siyaasiyiintaas uu soo xiro ama uu dagaal kala duwan ku qaado sida warbaahinta oo waayahan danbe loo adeegsaday in lagula dagaalo madaxdii hore ee dalka.